Iiyunithi ezi-5 800KW Walter-Cummins Generators afika eAngola
Ixesha Post: May-31-2021
Nangona lusuku olushushu lwasehlotyeni, alunakuwuthintela umdla wabantu bakaWalter ngalo msebenzi. Iinjineli zangaphambili ziye kwindawo yaseAngola ukufaka kunye nokulungisa ingxaki, kwaye zifundisa abasebenzi indlela yokusebenzisa iiseti zejenreyitha ngendlela echanekileyo. Kutshanje, iiyunithi ezi-5 800KW Walter uthotho Cummins generator iiseti eq ...Funda ngokugqithisileyo »
Iiseti ezivelisa i-Cummins ze-500KW zifika eMaldives
Ngo-2020, nge-18 kaJuni, iiyunithi ezi-3 zethu zohlobo oluthe cwaka lwe-500KW iiseti zejenereyitha zithunyelwa eMalafi, Kuthatha malunga nenyanga, abathengi bethu bafumana iiseti zomvelisi. Okwangoku, ingcali yethu uMnu Sun uye kwindawo yabathengi ngenqwelo moya, waqala ukuqhuba ukufaka iijenreyitha kungekudala kwaye wafundisa abasebenzi ...Funda ngokugqithisileyo »
Iiyunithi ezi-4 i-40kva Cummins zohlobo oluthe cwaka lweeRwanda
Kutshanje, iiyunithi ezi-4 ezitsha zohlobo lweWalter ezingathethiyo ezingama-40kva Cummins iiseti zomvelisi zithunyelwe eRwanda. Ukuthembela kubuchwephesha bemveliso yobuchwephesha, iiseti zeCummins zokuthula zizinzileyo zomsebenzi, umgangatho olungileyo, kunye nobuchwephesha obuphambili. Bane ...Funda ngokugqithisileyo »
Iseti yomvelisi wedizili kaWalter 1200KW ifika eJingdong Logistics Park
Ixesha Post: Feb-25-2021
NgoNovemba 23, 2019, iiyunithi ezimbini zenkampani yethu ze-1200kw Yuchai generator zafudukela eJingdong Logistics Park. Njengoko isaziwa njalo, iJD.com yinkampani ye-e-yorhwebo ezizimeleyo eTshayina. Umseki uLiu Qiangdong usebenza njengosihlalo kunye ne-CEO yeJD.com. Ine-JD Mall, ezezimali ze-JD, i-Paipa.com, i-JD ...Funda ngokugqithisileyo »
Injineli yethu yafika kwiiSolomon Islands
Ixesha Post: Meyi-13-2020
Kutshanje, iinjineli zomgca wokuqala zikaWalter zifikile eSolomon Islands ukuqala oomatshini bokulungisa izixhobo, ukuze zonke iijenereyitha zeedizili zifakwe kwimisebenzi yemihla ngemihla ngokukhawuleza. Ngeli xesha abathengi bethu bamanye amazwe bathenga iiyunithi ezi-2 zeVolvo 500KW idizili kunye neiyunithi ezi-1 zeVolvo 100KW idizili ...Funda ngokugqithisileyo »
Wamkelekile abathengi baseYiputa kumveliso wethu
Ngophuhliso olukhawulezileyo lwenkampani kunye notshintsho oluqhubekayo lwetekhnoloji ye-R & D, iYangzhou Walter Electrical Equipment Co, ltd nayo iye yandisa ngokuqhubekayo imarike yayo yamanye amazwe kwaye yatsala umdla wabathengi abaninzi bangaphandle. Nge-7 kaJuni 2018, indawo yokugcina iimpahla yase-Yiphutha ...Funda ngokugqithisileyo »
Umvelisi we-1000KVA Yuchai oya kwiiPhilippines
NgoJuni, nge-14 nge-2018 Sithumela kwelinye ilizwe iyunithi ye-1000kva yomvelisi ukuya ePhilippines, eli lixesha lesithathu inkampani yethu ithumela iimpahla ePhilippines kulo nyaka. Inkampani yethu inabaninzi abasebenzisana nabo kwiiPhilippines, kwaye ngeli xesha sisebenze nomakhi wezindlu eManila. Wayefuna ukuthenga i-1000kva ...Funda ngokugqithisileyo »
Idizili Generator, Umvelisi wePerkins 500kva, Ijenali yedizili yePerkins 500kva, Cwaka Uhlobo lweDiesel Generator, I-Diesel Generator ecacileyo, 60hz Cwaka Perkins800kva Idizili Generator,